Ankizivavy vehivavy mody any amoron-dranomasina - ho an'ny tora-pasika, vatohara, ranomasina, volley volleyball, rubber, manokana, marika, kofehy, fehikibo, fandroana
Kiraro ho an'ny tora-pasika - modely amin'ny kiraro fitaratra amin'ny fahavaratra ho an'ny fialam-boly, fety ary fampakaram-bady
Eo an-jorony ny fahavaratra - midika fa ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra sy ny fialamboly any an-dranomasina dia hosokafana haingana. Ity fotoana ity dia mety tsara amin'ny fanavaozana ny poketrao, izay toerana iray tokony haka kiraro kiraro kiraro - ny fiantohana ny fampiononana sy ny fampiasana sary mandritra ny fialantsasatra.
Ao amin'ireo fanangonana mandritra ny fahavaratra dia mamorona modely maotina izay hametrahana fahatokisan-tena sy mahomby mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra. Zava-dehibe ny mikarakara ny vokatra tsara, satria mety ho simba ny fihetseham-po sy ny fitsaharana amin'ny ankapobeny. Amin'izao andro iainana izao dia mivelatra manodidin-tsoavaly, sy ireo endrika tsy voafehy. Raha ny tsara indrindra, raha mahazo pairs maromaro ianao. Na dia izany aza, ao amin'ireo fanangonana farany dia misy vahaolana iraisam-pirenena ihany koa izay hameno ny sarin'ny tora-pasika, fa koa ny tsipìkandehibe. Andao hijerena ny kiraro fary lamaody 2018:
Kiraro ho an'ny savonin'ny savony plaj . Ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny tsena maoderina dia kiraro baskety tsy misy fotony ho an'ny tora-pasika. Ireo fitaovana toy izany dia nantsoina hoe "savony savony", saingy ny endriny kanto dia samy hafa tanteraka amin'ny toetr'andro.
Ireo kiraro dia mamely ny moron-dranomasina . Ny vahaolana izay tsotra sy tena tsara dia tsotra toy ny fandefasana tsotra amin'ny fonosana amin'ny rantsantanana. Ity safidy ity dia azo ampiharina amin'ny asany sy ny fanamafisana ny fanesorana sy ny fametrahana azy.
Kiraro kapa amin'ny torapasika . Ny safidy manerantany dia ny kapa ho an'ny vehivavy amin'ny fihetsika mitomandavana. Maka endrika tsara tarehy amin'ny loko mamirapiratra na amin'ny fehikibo, lamaody fialam-boly tsara tarehy sy tsipìka tanàna.
Crocs . Ny safidy malaza momba ny fizaran-taona farany dia manakatona clogs fingotra miaraka amin'ny harona tampoka, izay, raha ilaina, dia manamboatra ny kofehy. Ny anaran'ireny vokatra ireny dia azo avy amin'ny marika malaza, izay nanolotra fomba tsara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ny fototry ny fisafidianana fitaovana eo amoron-dranomasina dia fototra mafy orina. Raha ampiasaina amin'ny kiraro avo ianao, dia tsy maintsy mandà toy izany ianao, satria ny kiraro tsy mety simba dia hahatonga anao tsy hivoatra amin'ny mandeha amin'ny fasika na vato. Ny môdely amin'ny fianarana diso dia heverina ho safidy tena izy. Na izany aza, tokony ho mafy orina ny tsiranoka, ary tsara ho maina. Nefa ny ampahany ambony amin'ny vokatra dia mety misy - tady, lamba, vondrona iraisana ary vahaolana hafa. Ireo mpaka sary dia mampiasa fitaovana isan-karazany, nefa andeha hojerentsika ny kiran'ny vehivavy ho an'ny torapasika sy ny ranomasina amin'izao fotoana izao:
The rubber . Ny safidy lehibe dia ny vokatra vita amin'ny fingotra maharitra. Ity fitaovana ity dia tsy maloto ary mora diovina. Fa zava-dehibe ny mahatsiaro fa nandritra ny fotoana lava tao amin'ny modely toy izany dia tsy soso-kevitra ny mandeha, satria ny rubber dia tsy mamela ny rivotra.
Silicone . Ny Accessories avy amin'ny silicone dia nanjary lamaody lamaody amin'ny modely fingotra. Ny tombony amin'ity tranga ity dia ny endrika manintona kokoa - loko mamirapiratra, vokatra tsara.
Leather . Raha mitady vahaolana ara-pahasalamana bebe kokoa ianao, izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ary tsy miteraka fikorontanana, dia ho safidy tsara ny modely hoditra. Ary amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny mifidy fitaovana voajanahary.
Kiraro ho an'ny tora-pasika rovitra
Tsy ny toeram-pialan-tsasatra foana no mihevitra ny toerana hiorina amin'ny fasika madio sy madio, izay ahafahana mampamirapiratra amin'ny fako mahazatra. Matetika no mampiavaka ny tanimboly tsara tarehy sy malamalama ny moron-tsiraka. Ary amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny misafidy fitaovana izay hanaisotra ny tsy fahasalamana rehefa mandeha eny amin'ny vatokely. Ny mofomamy amin'ny filomanosana eo amin'ny torapasika mangatsiaka dia samy miavaka amin'ny hain-trano henjana izay mifanohitra amin'ny tongotra. Ny safidy tonga lafatra dia Crochets, izay mifanaraka tanteraka amin'ny endriky ny tongotra. Azonao atao ny misafidy ny pantora, fa ataovy azo antoka fa ny hany tokana dia miorina sy azo itokisana.
Fehiloha ho an'ny haran-dranomasina sy ny torapasika
Ny fialam-boly malaza any an-toerana dia mitsidika ny haran-dranomasina. Amin'ity tranga ity, ireo akora tena izy dia hikatona modely, izay ahafahanao mivantana mivantana. Ny kiraro toy izany ho an'ny moron-dranomasina sy ny ranomasina dia natao tamin'ny gripa na silikôla marefo. Azo aforitra ny tampony, fa ny solony dia miorina mafy. Ny safidy hafa dia ny kiraro akqua. Ny vokatra toy izany dia vita amin'ny neoprene na lamba vita amin'ny elastana avo lenta. Ny akoho-akanjo dia manodidina ny tongotra, mandalo rivotra ary manana fototra mafy orina, izay mety amin'ny mandeha eny amin'ny tany mahavelona ao anaty rano.
Vovoka ho an'ny volley volley
Ny faritry ny ranomasina dia toerana tsy natao hialana amin'ny fialan-tsasatra, fa amin'ny fanatanjahan-tena koa. Volleyball dia iray amin'ireo hetsika malaza. Ny fanatanjahantena ametra-pihetseham-po dia midika hoe milalao anaty akanjo fandroana eny amin'ny fasika. Na izany aza, ny fampiofanana maharitra dia mety mitarika ho amin'ny tsy fahamendrehana sy mandoro ny tongotra amin'ny fasika mafana. Amin'ity tranga ity, mila kiraro manokana ianao amin'ny tora-pasika. Ny fitaovana toy izany dia sôkôla, sady samy nohariana ary samy hafa. Saingy ny fototry ny vokatra dia fitaovana amin'ny solika na fingotra. Noho izany, ny tongolobe dia tsy mikitika ny tavy mahamay, ary ny fiaraha-miasa tsara dia tsara.
Kiraro kiraro amin'ny kirany
Elefanta tsara tarehy sy tsara tarehy no modely amin'ny kiraro azonao. Ity safidy ity dia aseho ho kapa mihidy, ary misokatra mivelatra. Ny kiraro fitorevan'ny vehivavy eo amin'ny kiraro ho an'ny shorts, sarafan- jiro maivana sy rongony. Rehefa misafidy ireo fitaovana ireo dia zava-dehibe ny fisafidianana endrika ambany amin'ny kiraro. Satria ny fiakarana mafy dia tsy ho sahirana raha mandeha amin'ny fasika. Ny vahaolana malaza dia ny savaranon-tsakafo amin'ny gripa. Ireo modely ireo dia manamboatra ny tongotra, ary ny fitaovana maoderina dia mamela anao handeha eny ambony rano, nefa tsy mihintsana ny endrika mahafinaritra.
Kitapo Beach eo amin'ny sehatra iray
Ny modely ny fizotran'ny fizaran-taona dia lasa modely amin'ny saha lehibe sy matevina. Raha misafidy singa manokana ho an'ny fialantsasatra eny an-dranomasina ianao, dia ajanòny amin'ny endrika miaraka amin'ny sehatra iray. Tandremo tsara ny kiraro kiraro mahafinaritra, izay manazava ny reraka amin'ny tongotra na dia be aza ny akanjo lava. Ny fialofana amin'ny fotony dia heverina ho safidy tsara. Ny tendrony amin'ireo vokatra ireo dia tsara tarehy vita amin'ny rongony, vato, kavina, kavina ary fanaka hafa, izay hanampy amin'ny fampisehoana ny sary.
Kitapo misy kiraro amin'ny kiraro
Raha tsy manilika ny safidy amin'ny famenoana ny tsipìka amin'ny lohataona miaraka amin'ny akanjo maoderina eo amin'ny voditongotra , dia tsara ny misafidy ny modely amin'ny kiraro maranitra mafy. Ny pensilihazo ambony sy ny barika dia tsy mety, satria ho sarotra ny handehandeha amin'ny fasika sy ny tara tsy vita. Ny kiraro onjampeo ho an'ny vehivavy eo amin'ny voditongotra dia aseho amin'ny fiakarana tsy mihoatra ny 5 santimetatra. Ny vahaolana tsara dia ho kitapo avo be. Ity safidy ity dia mahafinaritra amin'ny famolavolan'ny kapa sy ny savily lasopy maina. Ny safidy amin'izao fotoana izao dia heverina ihany koa ho fisokafana mivelatra eo amin'ny voditongotra sy ny sehatra.
Kiraro ho an'ny fampakaram-bady eny amoron-dranomasina
Tamin'ny fomba maoderina, fanapahan-kevitra malaza ny nitazona fanambadiana maromaro tany an-dranomasina. Io safidy io dia manolotra tanteraka ny toetrany mampientanentana amin'ny hetsika, ary ny lamaody tsara tarehy dia hanampy loko manokana amin'ny fampakaram-bady. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny mieritreritra ny famitana ilay sary, mba tsy hahatsapa ny tsy fahasalamana sy ny tsy fitoviana. Ny safidy tonga lafatra dia fampakaram-bady baletatra amin'ny trano fialofana. Ny hafainganam-pandeha dia ho kapa sokay, voaravaka vato, vato, tulle, fifandraisana amin'ny seza na chiffon.
Kiraro ho an'ny fampakaram-bady ny mozika dia mety tsy ho tanteraka mihitsy. Amin'ity tranga ity, manolotra akanjo voalohany amin'ny tongotra ireo stylists, manahaka kapa tsara tarehy. Ny modely toy izany dia aseho amin'ny endrika rongony, kasety na kofehy manodidina ny tendron-tsôkôlà miaraka amin'ny fefy lava mitongilana eo amin'ny rantsantanana afovoany. Ny tapany afovoany dia voaravaka amin'ny perla, dantelina, akanjo lava ary ny endriny hafa, izay tena malemy sy kanto.
Kiraro mozika Branded
Amin'izao tsena anio izao, afaka misafidy tsy vitan'ny stylish fotsiny ianao, fa koa safidy tsara amin'ny fanatanterahana ny sary. Ny vokatra Branded dia manavaka ny fanoherana avo lenta sy ny fahamendrehana. Ary raha mijanona amin'ny fanangonana manokana ianao, dia ny tsipìkanao dia ho voalohany sy tsy mahazatra. Fitaovana manokana, ohatra, ho an'ny vatokely na vatokely, tsara kokoa ny misafidy amin'ny orinasa malaza. Ity vahaolana ity dia hanome toky ny hatsarana sy ny fampiharana. Andeha hojerentsika hoe inona ireo marika no malaza indrindra amin'ny famokarana vokatra avy amin'ny torapasika:
Chanel . Ao amin'ny fanangonana an'ity marika ity dia hahita vokatra tsara ianao, fa koa ny vokatra azo atao mba hanampiana ny tora-pasika sy ny tsipika eny an-tanàna. Ny mpanamboatra manolotra fandefasana fingotra tsara sy akanjo vita amin'ny hoditra.
Crocs . Ny marika malaza dia hanampy anao hahita ny modelinao "Crocs" mahasoa. Ao amin'ny fanangonana ny marika dia misy koa savony savony maranitra, kapa ary kapa vita amin'ny hodi-kazo sy silikana mafy.
Rider . Ny kiraro fako amoron-dranomandry tsara indrindra no aseho amin'ny fanangonana an'ity marika ity. Ny famolavolana ny vokatra dia tsotra, fa tena tsara. Ary raha ny fitaovana ampiasaina, dia tsy misy fisalasalana.
Kiraro any Beach De Fonseca
Ity marika shoe malaza sy malaza ity dia hanampy amin'ny fisafidianana ny vokatra ho an'ny fotoana rehetra, ny tsiro sy ny kitapo. Ny tena zava-misy ao amin'ny tsena maoderina dia ny akanjo ho an'ny tora-pasika miaraka amin'ny vatokely, dia maneho tsy avy amin'ny fitaovana tsara ihany, fa koa amin'ny fomba maoderina. Ao amin'ny fanangonana lamaody ny De Fonseca dia misafidy andian-dahatsary mahafinaritra izay azo ampifandraisina amin'ny akanjo maromaro amin'ny andro, ary amin'ny hariva amin'ny akanjom-behivavy . Ireo mpanamboatra dia manolotra Accessories tsy mendrika ho an'ny vehivavy, fa koa ho an'ny lehilahy sy ny ankizy, izay manampy amin'ny fiantsenana haingana sy mora ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Gringha beach shoes
Ny vokatra amin'ity marika ity dia azo fantarina ao amin'ny tsena maoderina miaraka amin'ny fomba fandravahana breziliana. Ary na dia vita amin'ny loko marevaka aza ny vokatra, ny endriny dia mbola mameno ny endriny mahafinaritra. Ny mpanamboatra lamaody dia mampiasa ny vahaolana amin'ny ankapobeny - tsipìka, vato, akorandriaka ary endri-javatra hafa. Ao amin'ny fanangonana lamaody dia misy kiraro fingotra ho an'ny tora-pasika sy ny vokatra vita amin'ny hoditra. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana rehetra dia mahafeno ny kalitao avo lenta, ny mason-koditra ary ny fampiharana. Raha mitady fomba tsara sy miaraka amin'ny safidy maotina ianao, dia ilaina ny mifantoka amin'ny fanentanana Grendha.
Ity marika fanatanjahatena Amerikana ity dia efa nolazaina momba ny zava-drehetra sy ny maro hafa. Noho izany, vokatry ny Nike, tsy misy fisalasalana. Ny drafitra maoderina dia hameno ny safidy azo ampiasaina ary hahatonga ny sary tsy hay hadinoina. Ny kiraro amin'ny torapasika amoron-dranomandry Nike dia solontenan'ny lamaody vietnamiana sy shale. Eto dia ampiasaina ny fitaovana toy ny fingotra, polyurethane, lamba sy hoditra. Ny modely tsirairay dia misy karazana mahazatra, izay tena ilaina amin'ny fialam-boly sy ny mandeha an-tongotra. Ao amin'ny fanangonana lamaody, hifidy vahaolana mazava sy mifanohitra ianao, ary safidy voafetra.
Montclair jacks - ahoana no hanavaka ny orijana amin'ny sandoka?
T-shirt miaraka amin'ny printy
Vest mit Kapuze
Kofehy ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny fitafy - ny tsara tarehy indrindra
Fanomezana ho an'ny Andron'i Nicholas St.
Karazana karazana inona no mety hisy?
Fiakanjo hafakely ho an'ny taona 2014
Zava-bita ao Odessa
I Irina Sheik dia naneho ny sarin'ireo fampisehoana an-tsarimihetsika momba ny tsenan'ny Intimissimi
Ahoana no hakana ireo masom-bary mba hahazoana lanjany?
Bag of Dior
Amin'ny inona no tokony hitafy kiraro amin'ny fanamboarana tracteur?
Ny raharaha Zac Efron amin'i Rebecca Ferguson ve?
Halloween Costume ho an'ny zazalahy
Ny Nosy Swallow, Crimea, Okraina
Benefis de caviar mena
Tenda mahazatra - fitsaboana